Dhamaan umadda Somaaliyeed waxaan xasuu sinaynaa in loobaahan yahay in aan ogaano in umad kastoo kajirta dunida in mar taariikhdooda kamid ah ay dagaalamayn sidaynookale. Maalmo kadibna way xaliyayn khilaafkooda, kadibna wadajir ayay horay oogu dhaqaaqayn.
Umaduhu markay dagaalamaan waxay iskugu yimaadaan miiska wada hadalka waxayna kawada shaqeeyaan siday usoo afjari lahaayayn khilaafka udhaxeeya, una gaari lahaayayn nabad waarta. Haddaba waxaa iswaydiin mudan maxaytahay sababta aan laxalin waynay khilaafka dhaxdeena yaala mudada dheer hadaynu nahay umada Soomaaliyeed?
Si aynu uxalino dhibkayna, waxaan ubaahan nahay in aan ogaano nabaddu in ay kujirto gacantayna loona baahan yahay in aan wadajir ooga shaqayno. Lagasoo bilaabo markay burburtay doowlad daynii sanadkii 1991 waxaan caado kadhiganay in aan kudhaqano waxa burburin nabadda, khilaafkana hormarin sida isku kaalmaynta gardarada, qabyaaladda, iyo aflagaadada la isku siimarin saxaafadda.
Waamuhiim in aan waxkabadalno siyaasadda dalkayna ay kudhisan 4.5 (qabiilka) laguna baddalo siyaasad kudhisan xisbi siyaasadeed.